Ngaphandle ihaba uma sithi - Ibiza esiqhingini esincane, okuyinto ijabulela ithandwa enkulu. Futhi kubo bonke imikhakha izivakashi zithuthelekela: abantu ezinomsindo hhayi ocebile kakhulu abasha, VIP-amaklayenti, imindeni enezingane futhi abalandeli ethule, uphumule. Isibhakabhaka ugcwele Internationale: isiNgisi, isiJalimane, isiFulentshi, ngokwemvelo - Spanish, futhi sisanda kwenyuka share bakithi. Zonke basuke bakhangwa Ibiza. Amanani, ikakhulukazi ngenkathi, "luma", kodwa akusho okwesabisa abahambi. Phela, ngesikhathi zokungcebeleka abazilindele induduzo yaseYurophu.
I umbono wokuqala we isiqhingi
Ngaphambi ziyahlakazeka zingene zokungcebeleka yabo (abathandi ukuphila ebusuku - enhloko-dolobha homonymous balesi siqhingi futhi emzini San Antonio, amalungu aleli iholidi okuphumuzayo - ogwini olusenyakatho, namanoni amakati - San Miguel), zonke izivakashi eza Ibiza sezindiza. Lubekezelela igama San Jose (St Joseph) lalisemzileni emoyeni hhayi kuphela izakhamuzi Ibiza, kodwa futhi lesi siqhingi elingumakhelwane Formentera. Kuyinto sezindiza futhi inikeza umbono wokuqala okulindele wena ogwini.
Indawo nendlela ukuthola izindawo
Ngokungafani ngosonhlamvukazi abakhulu Yurophu, lapho izindiza yomhlaba mayelana amahlanu ukusuka edolobheni, isiqhingana esiqhele ithinta compactness yayo. Abasinda indiza Ibiza, abagibeli ngeke sisebenzise amahora ambalwa ukuze uthole resort yakho. San Jose Airport itholakala amakhilomitha ayisikhombisa kuphela eningizimu ye-dolobha yesiqhingi. Ukuze maphakathi edolobheni siphela inombolo Shuttle 10. Iziqondiso kuyo ngeke ukhokhe 3.2 Je Ngo zasehlobo, futhi ngo-September, ngebhasi futhi inikeza ukufinyelela ngqo emzini San Antonio - lena inombolo umzila 9. Amatekisi in Ibiza ukusebenzela yamanani amabili. Ngo ngesonto kusukela eziyisikhombisa ekuseni kuze eziyishumi kusihlwa ukuba bagibele imoto izobiza 3.25 Je plus komgwaqo - 0.98 euro ikhilomitha ngalinye. Ezinye izindaba zika-ukukhokhelwa komgwaqo wena, kuyoba 1.2 Je ikhilomitha ngalinye. Uma ufuna ukushayela in Ibiza sezindiza ngqo emnyango ukuphela, engeza enanini zamaRandi ezimbili zokupaka ikhokhwe.
Phakathi Yombango, zaseBalearic Islands ayedinga airfields lempi. Ngakho-ke, i-evulekile aphathekako afana lakhiwa Ibiza. Ngemva kwempi, ngo-1949, isakhiwo esincane yokwamukela abagibeli abavamile lakhiwa. Kodwa ngemva kweminyaka emibili, Franco uvinjelwe ukusetshenziswa airport Ibiza izinjongo zokuthula futhi wakushiyela enkanjini. Nokho, isidingo zokungcebeleka esiqhingini babe namandla kunezitha kwezempi umashiqela izinhlelo. Kakade ngo-1958, sezindiza waphinda wathola. Manje kuthatha abagibeli kwezigidi ezinhlanu ngonyaka. Ngaphezu kwalokho, lokhu kugeleza kuyinto heterogeneous kakhulu. Ngo nenkathi lapho kukhona charter izindiza umhlaba, amasevisi esibulalayo kuphela zingasiqedi amandla.
Amasevisi esikhumulweni sezindiza
Njengakwezinye izindawo e-Europe, kukhona nezindinganiso ezithile. Passenger induduzo futhi basamukela Ibiza sezindiza sihlinzekela 100%. Kukhona izindawo zokupaka (kufaka abakhubazekile). Konke izinkinobho zommbila izinhlamvu nabo kulabo abayizimpumputhe. Round isikhungo sezokwelapha iwashi. Ukuze ushiye Spanish duty khulula izitolo ukunikeza impahla yabo ngamanani aphansi. Inkantini, amathilomu nezindawo zokudlela enze kube nokwenzeka ukuba adle phambi indiza. Ukushintshwa kwemali futhi ukuqasha imoto, ungashiyi isakhiwo sezindiza.
"I-Airbus 321": incazelo, izihlalo ezihle kanye nesakhiwo
Kuvele biography ezithakazelisayo Demi Mur
Jonathan Tropper: biography, izincwadi, impendulo yomfundi
Lapho ukuya eholidini ngemoto esuka eMoscow?